Bogga Ciyaaraha, 01 February 2019
Juve oo la garaacay iyo Fiorentina oo xasuuqday Roma
Kooxda Juventus ayaa dhadhamisay guuldarradi ugu horreysay ee kasoo gaarta ciyaaraha Talyaaniga xilli ciyaareedkan, kaddib marki ay xalay 3-0 ku khasaartay kooxda Atalanta ciyaar ka tirsaneyd wareega sideeda ee tartanka Coppa Italia.
Chelsea oo jabtay iyo Liverpool oo la hakiyay
Liverpool ayaa ka faa’ideysan weyday guuldaradi naxdinta laheyd ee Manchester City kasoo gaartay Talaadadi kooxda Newcastle United, ka gadaal marki ay arbacadi shalay barbarro 1-1 ah la dhaafi weyday naadiga Leicester City.
Barcelona oo karbaashtay Sevilla
Barcelona ayaa 6-1 ku dardartay xalay kooxda Sevilla is-aragi labaad ee wareega sideeda eetartanka Copa del Rey.
Goos-goos: Juventus, Chelsea oo Laga Badiyay iyo Liverpool oo la qabtay
Naadiga Juventus oo difaacaneysay koobka Coppa Italia, ayaa guul darro naxdin badan kala kulantay naadiga Atlanta.
Juventus oo u dhawaatay horyaalkeedii 8-aad oo xiriir ah
Horyaalka Serie A-da Talyaaniga waxaa wali loo maaro la’yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2-1.
Real iyo Barcelona oo wada badiyay
Kooxaha waaweyn ee horyaalka La Ligaha Spain ayaa todobaadkaan wada badiyay, Barcelona waxay 2-0 ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaarti xalay ku dhameysatay 10 laacib kaddib marki kaarka casaanka ah loo taagay ciyaaryahan Bernardo.
Faah-faahina samei-finalka tartanka Koobka Asia
Waxaa heer gaba gaba ah maraya Koobka Qaramada Asia ee maalmahaan ka socday magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Isutaga imaaraadka Carabta.
Monaco oo eriday Thierry Henry
Maamulka kooxda Monaco ayaa shaqada ka ceyriyay tababarahoodii Thierry Henry kaddib marki uu kooxda leyliyay kaliyah 20 kulan.
Chelsea oo gaartay finalka League Cup
Kooxda Chelsea ayaa gaartay finalka koobka League Cup-ka Ingiriiska, kaddib marki ay rigoorayaal 4-2 ku garaacday kooxda Tottenham.
Real Madrid oo noqotay kooxda ugu dhaqaalaha badan Yurub
Kooxda Real Madrid iyo Barcelona ayaa noqday labada koox ee ugu dakhliga badanaa Yurub sannadki tagay ee 2018-ki, iyaga oo booskaasi kala baxay kooxda Manchester United oo in muddo ah aheyd kooxda ugu dhaqaalaha badan Yurub.
Sevilla oo cashir u dhigtay Barcelona
Kooxda Barcelona ayaa xalay gobolka Andalusia kala soo laabatay guuldarro kaddib marki ay 2-0 kusoo garaacday kooxda Sevilla ciyaar ka tirsaneyd is araga koowaad ee wareega sideeda ee tartanka Copa del Rey.
Neymar oo dhaawacmay
Kooxda Paris St Germain ayaa xalay gaartay wareega 16-ka koox ee koobka French Cup, ka gadaal marki ay 2-0 ku garaaceen naadiga Racing Strasbourg.